Guddiga La dagaallanka Musuq-maasuqa oo ka digay wax is daba marin | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - War ka soo baxay Guddiga Madaxa Bannaan ee La-dagaallanka Musuqmaasuqa ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa lagu sheegay in guddigu billaabay kormeeridda dhaqaalaha la galinayo doorashooyinka, wuxuuna ku baaqay in la joojiyo ku tagri falka hantida qaranka.
“Iyadoo laga ambaqaadayo waajibaadka dastuuriga ah, Guddiga Madaxa Bannaan ee La-Dagaalanka Musuqmaasuqa wuxuu si dhow ula socon doonaa ficillada Guddiyada Doorashooyinka, ergooyinka iyo musharrixiinta si looga hortago nooc kasta oo khaladaad doorasho ah”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Guddiga.
Warka waxaa lagu sheegay in Guddiga Madaxa Bannaan ee La-dagaallanka Musuqmaasuqa ay soo gaaren tabashooyinka ay soo bandhigayaan dhammaan daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka, kuwaas oo la xariira wax is daba-marin, waxayna ku taliyeen in laga fogaado “laaluusha bixinta iyo qaaashada, iibsiga codadka xilliga doorashada lagu jiro, ka hor iyo ka dib doorashooyinka”.
Doorashooyinka dhawaan ka billaabanaya Soomaaliya ayaa la rumeysan yahay in ay noqon doonaan kuwii ugu musuq maasuqa badnaa taariikhda dalka, waxaana hadda olole xooggan billabay koox dhalin yaro ah oo Madaxtooyadu qorsheysay in loo boobo kuraasta Baarlamaanka.
Doorashooyinkii Maamul Goboleedyada ka qabsomay muddadii ay Kooxda Farmaajo xaafiiska joogeen, ee musaqa iyo boobka ku saleysnaa ayaa hal-beeg u noqon kara doorashooyinka Dowladda dhexe ee soo socda.